I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jan And Ace
U-Jan And Ace uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Ukuhlobisa kwesitayela se-cottage nge-shabby chic kanye nefenisha embozwe ngokushelela. Sikumamayela angu-3-1/2 ukusuka eNorth Bend (McCullough) Bridge futhi cishe amamayela angu-5 kuphela ukusuka ogwini lolwandle oluseduze, i-Horsfall Beach kanye nezindunduma zesihlabathi ezidumile. Uzojabulela ubumfihlo bakho kule ndlu encane ethule yezivakashi enombono omkhulu kakhulu futhi omuhle, nakuba isendaweni yokuhlala eyabelwe indawo yokuhlala enkulu. Izwa ukushona kwelanga okuningi okuhle ngaphandle kwefasitela legumbi lakho lokuhlala.
Asiyona indawo engabhemi, ayikho indawo yokuhlala eshisayo; futhi ngiyaxolisa akukho zilwane ezifuywayo. Leli kotishi elincane lilungele abahlengikazi bezokuvakasha noma abanye ochwepheshe bezokuvakasha okungenzeka ukuthi beza esibhedlela sase-Coos Bay's Bay Area noma emitholampilo yendawo yezokwelapha. Uzokwazisa ukuthula nobumfihlo obutholakala lapha. Ikotishi lizungezwe ukuhlobisa futhi umbono uyamangalisa! Ingemuva ledekhi lingu-10" x 24" futhi lihlinzekelwe ukuze ulijabulele futhi lihlanganisa ne-grill ozoyisebenzisa.
Ayisebenzi emaphathini amakhulu kunabantu ababili.
Indawo esemakhaya enezindlu nhlangothi zombili kodwa ifihlwe ezihlahleni. Sisemanzini sibheke ngaphesheya kwetheku sibheke ngasedolobheni laseNorth Bend. Singaphandle kwemingcele yedolobha cishe ngamamayela angu-3-4 (noma amamayela angu-1.5 uma ukwazi ukundiza uwele emanzini).
Ibungazwe ngu-Jan And Ace
Sinobungane futhi sinobuntu kodwa futhi sinenhlonipho enkulu ngobumfihlo bakho. Indawo yakho iyindlwana ehlukile kule ndawo ukuze ukwazi ukuza uhambe ngendlela othanda ngayo imini noma ebusuku. Sinolwazi oluningi ngendawo yasendaweni nezinto ezikhangayo futhi sihlala sijabule ukukunikeza imibono yalokho ongakubona noma ukwenze. Sitholakala njengoba udinga kodwa futhi singase singabonakali ngendlela ongathanda ngayo.
Sinobungane futhi sinobuntu kodwa futhi sinenhlonipho enkulu ngobumfihlo bakho. Indawo yakho iyindlwana ehlukile kule ndawo ukuze ukwazi ukuza uhambe ngendlela othanda ngayo imini…
UJan And Ace Ungumbungazi ovelele